यी ४ तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ दोर्दी खोलाको आईपीओ रिजल्ट, तपाईलाई पर्याे की ? « Artha Path
यी ४ तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ दोर्दी खोलाको आईपीओ रिजल्ट, तपाईलाई पर्याे की ?
काठमाडौं । दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ बुधबार बाँडफाँट सम्पन्न भएको छ । बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका अनुसार कम्पनीको आईपीओमा अन्तिम दिनसम्म १४ लाख ७१ हजार ६६५ जना आवेदकले १ अर्ब ६३ करोड ९७ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६३ लाख ९७ हजार ११० कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिएका थिए । जसमा विभिन्न कारणले ८८२ जनाको आवेदन रद्द भएको छ भने १४ लाख ७० हजार ७८३ जना आवेदकको मात्रै सदर भएको छ ।
रिजल्ट हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला: